အရင်ခေတ်က လူမျိုး တွေကျင့်သုံးတဲ့ SPANISH DONKEY ဆိုတဲ့ အပြစ်စီရင်နည်း…. - Store Feeling
အရင်ခေတ်က လူမျိုး တွေကျင့်သုံးတဲ့ SPANISH DONKEY ဆိုတဲ့ အပြစ်စီရင်နည်း….
အရငျခတျေက လူမြိုး တှကေငြ့ျသုံးတဲ့ Spanish Donkey ဆိုတဲ့ အပွဈစီရငျနညျးပါ ဒီအပွဈစီရငျနညျးကို မခံမရပျနိုငျလို့ သဆေုံးသှားတဲ့လူလညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။Spanish Donkey (သို့) Wooden Horseလို့အမညျရတဲ့ ပစ်စညျးကိုတော့ အမြိုးသမီးတှကေို အပွဈပေးရာမှာသုံးခဲ့ကွပါတယျ။အမြိုးသားတှအေတှကျတော့ အသုံးပွုတာနညျးပါတယျ။
သဈသားတုံးကိုတွိဂံလြောစောကျပုံစံ ခြှနျနအေောငျသှေးထားပါတယျ။အပွဈပေးခံရတဲ့သူကို ကိုယျတုံးလုံးခြှတျခိုငျးထားတယျ။ပွီးတော့ဒီကောငျကွီးရဲ့ အပေါျကနထေိုငျခိုငျးလိုကျတယျ။ပွုတျကမြသှားအောငျကွိုးနဲ့လူကိုခညြျထားလိုကျတယျ။အလေးတုံးတှကေို ခွထေောကျရဲ့တဈဖကျစီမှာဆှဲထားတယျဗြ။သဈသားတုံးအခြှနျကလူရဲ့အလယျတည့ျတည့ျကိုတဖွညျးဖွညျးထိုးခှဲလာပါတယျ။အပွဈပေးခံရတဲ့သူက ဝဒေနာကိုမခြိမဆံ့ခံစားရပွီးမကွာခငျမှာပဲလြောသှားပါတယျ။
အရင်ခေတ်က လူမျိုး တွေကျင့်သုံးတဲ့ Spanish Donkey ဆိုတဲ့ အပြစ်စီရင်နည်းပါ ဒီအပြစ်စီရင်နည်းကို မခံမရပ်နိုင်လို့ သေဆုံးသွားတဲ့လူလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
Spanish Donkey (သို့) Wooden Horseလို့အမည်ရတဲ့ ပစ္စည်းကိုတော့ အမျိုးသမီးတွေကို အပြစ်ပေးရာမှာသုံးခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ အသုံးပြုတာနည်းပါတယ်။
သစ်သားတုံးကိုတြိဂံလျောစောက်ပုံစံ ချွန်နေအောင်သွေးထားပါတယ်။အပြစ်ပေးခံရတဲ့သူကို ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ခိုင်းထားတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ အပေါ်ကနေထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြုတ်ကျမသွားအောင်ကြိုးနဲ့လူကိုချည်ထားလိုက်တယ်။အလေးတုံးတွေကို ခြေထောက်ရဲ့တစ်ဖက်စီမှာဆွဲထားတယ်ဗျ။သစ်သားတုံးအချွန်ကလူရဲ့အလယ်တည့်တည့်ကိုတဖြည်းဖြည်းထိုးခွဲလာပါတယ်။အပြစ်ပေးခံရတဲ့သူက ဝေဒနာကိုမချိမဆံ့ခံစားရပြီးမကြာခင်မှာပဲလျောသွားပါတယ်။